Waxsoosaarka Baradhada ee Masar: Shuruudaha Dhoofinta waxay sare uqaadeysaa xiisaha Biopesticides - Magazine Nidaamka Baradhada
Bogga guriga Analytics
Marka laga hadlayo Masar, waxaan badanaa ka hadleynaa kama hadlayo beeraha. Dhanka kale, warshadani waxay bixisaa qiyaastii 12% GDP-ga qaran, oo lagu qiyaasay illaa $ 250 bilyan.
Inta badan dalka ayaa ku yaal suunka lamadegaanka, taas oo aan ka hor istaagin Masar inay tahay soosaaraha ugu weyn ee baradhada EU. Si la yaab leh, Masriyiintu waxay ku guuleystaan ​​natiijooyin aad u sarreeya iyagoo adeegsanaya ilaha hoose - celceliska isticmaalka sanadlaha ah ee cayayaanka ayaa ka hooseeya celceliska adduunka. Sidee bay ku sameeyaan taasi?
GROPRO Corp., soo saare Mareykan ah iyo iibiya alaabada ilaaliya dhirta dhirta, ayaa dhowaan dhammaystiray safar cilmi baaris dhinaca beeraha ah oo ku aaday Masar. Bishii Juun, GROPRO waxay siidaayay warbixin ay diyaariyeen khabiirayaasheeda kadib safarkii ay ku taggeen Xariirka Bartamaha ee Maanta. Halkan waxaa ku xusan qodobo kooban.
Xayawaankaaga u roga meelaha beeraha
Gobolka wax soosaarka Masar wuxuu badiyaa ku kooban yahay dooxada Niilka iyo Niilka Delta, oo leh hawooyin badan iyo dhul carreed oo ku yaal Siinay. Dhammaan dhulka Masar lagu beeray waa la waraabiyaa, marka laga reebo meelaha qaarkood ee ku teedsan badda Mediterranean.
Sababo la xiriira tayada hoose ee biyaha Niil awgood, ilaalinta dalagyada lagu beero meelaha la waraabiyo waxay ka mid yihiin qodobbada ugu muhiimsan ee dammaanad qaadaya isla markaana hubiya tayada la aqbali karo ee dalagga mustaqbalka (iyo sidoo kale tirada wax soo saarka) dhammaan dalagyada la beero.
Inta badan dhulalka dhul beereedka Masar lama dhihi karo waa weyn: cabirka iskucelceliska beeruhu waa ilaa 1 hektar. Baaxadda dhul beereed sanadle ah ee Masar waa ilaa 4,83 milyan oo ha. Dowladda ayaa ka shaqeyneysa qorshe ballaaran oo maalgashi si ay u kordhiso dhulka beeraha ee dalka iyadoo ku dareysa 1,2 milyan oo hektar oo qayb ka ah hannaanka dib-ugu-soo-celinta dhulka ee koonfurta. Afartii sano ee la soo dhaafay, dhul 370 hektar ah oo dhul cusub dib loo soo ceshay ayaa lagu daray saldhigga beeraha ee Masar.
Masar waxay u rogmadaa lamadegaanka dhul beereedyada iyadoo loo adeegsanayo waraabinta qulqulka waraabinta iyo teknolojiyadaha casriga ah ee beeraha.
Soosaarka sanadlaha ah ee miraha iyo khudradda Masar gudaheeda 2018 waxay ahayd ilaa 35 milyan oo tan (FAO). Beeraleyda badankood waxay koraan yaanyada, basasha iyo baradhada. Masar waa dhoofinta ugu weyn ee baradhada bakhaarka.
Dhoofinta Wareejinta Damaasha
Sannadkii 2018, Masar waxay dhoofisay in ka badan 759 tan oo baradho bakhaar ah waxayna gashay shanta dal ee ugu badan ee dhoofinta, iyagoo siinaya baradhada ugu horreyn Ruushka iyo Midowga Yurub. Sanadkii 200, Masar waxay qaadatay 2019% suuqa dhoofinta baradhada adduunka, dhoofinta baradhada Masar ee Masar waxay ahayd 5 milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Baradhada Masar waxay caan ku yihiin tayadooda wanaagsan, maadaama ay ku koraan dhoobo ama ciid ciid ah. Baradhada Masar waxay sidoo kale caan ku yihiin iibsadayaasha awooddooda kaydinta muddada dheer. Xilliga dhoofinta baradhada Masar wuxuu socdaa laga bilaabo bartamaha Janaayo illaa dhammaadka May.
Adeegsiga dawooyinka loo yaqaan 'biopesticides' ee beeraha Masar
Marka la eego mugga weyn ee dhoofinta dalagga Masar ee EU, arrinta tayada tayada alaabooyinkan ayaa noqotey mid sii kordheysa. Suuqa Yurub wuxuu leeyahay xeerar aad u adag oo xaddidaya adeegsiga kiimikooyinka wax soo saarka cuntada.
Isla mar ahaantaana, soosaarayaasha Masar ma aha kuwo si firfircoon u adeegsanaya biopesticides, laakiin khubarada GROPRO waxay rumeysan yihiin in xaaladani isbeddeleyso.
Tags: biopesticidesbaradhada tusaale ahaanwaraabka
ShareShare107Share77Si aad u soo diri
Udmurtia waxay ku tiirsaneysaa nidaamyada kiraynta ee lagu iibsado mashiinnada beeraha